Ukusebenza kweentlobo zoMxholo kwi-B2B yeNtengiso yezeNtlalontle | Martech Zone
Zeziphi iintlobo zomxholo ezikhuthazwayo kwimithombo yeendaba ezibonelela ngeyona mpembelelo inkulu? Unokumangaliswa. Gcina ukhumbula ukuba olu luhlu lweentlobo zomxholo ayisiyiyo eyona nto isebenza ngokukuko konke-yimpendulo nje evela kubathengi be-B2B kumxholo onefuthe elikhulu emva kokuba bewujongile xa kwabelwana ngawo eluntwini.
Okuphambili, nolu uluhlu lwezona ntlobo zinomxholo zinempembelelo kunye neenkcazo ezivela kwi-Eccolo Media:
case Studies Imiboniso eneenkcukacha zendlela abathengi abazisebenzisa ngayo iimveliso okanye iinkonzo zomthengisi.
Izikhokelo zeTekhnoloji eneenkcukacha - inkcazo enzulu yeempawu zemveliso kunye nokusebenza, okanye imiyalelo yenyathelo nenyathelo yokuphumeza isisombululo setekhnoloji.
Amaphepha White - Uhlalutyo lwetekhnoloji okanye imiba yeshishini kunye neendlela ezivela kumbono ozimeleyo, othengisa ngokungathathi hlangothi
Iipodcasts -Urekhodo lweaudiyo lobungqina bamakhasimende okanye iingxoxo neengcali zemixholo ezinokuhanjiswa kwiWebhusayithi okanye zikhutshelwe kwidesktop okanye isixhobo esiphathwayo.
blog Posts Ukuthumela okufutshane kwi-Intanethi okuphatha izihloko ezikhoyo ngendlela engacwangciswanga, ngenjongo yokubandakanya abathengi kunye nethemba.
infografikhi -Imiboniso ebonakalayo yedatha kunye neendlela, ngenjongo yokunxibelelana ngolwazi oluntsonkothileyo ngokuchanekileyo.
Videos -Isetyenziselwa uluhlu olubanzi lonxibelelwano lokuthengisa, ukusuka kubungqina babathengi ukuya kwimiboniso yemveliso kudliwanondlebe oluphezulu.
iincwadana - imveliso, inkonzo, okanye ulwazi lomthengisi.
Iincwadana -Incwadana yendabuko ekwifomathi ye-elektroniki kwaye ihlala inesishwankathelo senqaku elikhawulezayo elinamakhonkco kunyango olude.
Ebooks - amaxwebhu amafomathi amade ayilelwe ukuba asetyenziswe ngokwamanani, ukuhambisa ulwazi ngendlela evuselelayo ebonakalayo kwaye ihlala inxibelelana.
webinar - iisemina ezikwi-Intanethi ezenza intetho okanye iindibano zocweyo nokuba zihlala okanye zibhalwe ngaphambili, kwifomathi efunekayo.
Amaphepha okusebenzela abaKhuphiswano - thelekisa amanqaku emveliso kunye nemisebenzi evela kubathengisi abaninzi.
Iimagazini zabaThengi -Kuprintwa nakwi-intanethi, ukuhambisa iindaba zenkampani kunye nokuphonononga imiba ephambili kunye neendlela.
Izilayidi zewebhu -Iintetho ezenziwa kwi-Intanethi ezigubungela iinkcukacha zemveliso okanye izinto eziphambili, ikakhulu kugxininiso kwiitshathi nakwimifanekiso.
Kumthamo wesithathu we I-Eccolo Media 2015 yeNgxelo yoPhononongo loMxholo weTekhnoloji, Sibuze abathengi beetekhnoloji, ukusuka kwiinjineli ukuya kwi-c-suite, ukuba basixelele ukuba yeyiphi imixholo abayisebenzisayo ngeendlela zentlalo ngexesha lokuthenga itekhnoloji.
Iarhente yethu iphuhlise indlela echuliweyo esiyibiza ngokuba sisakhiwo igunya content kubaxumi. Ngelixa oku kungasentla kuthetha eyona nto inegalelo kwisigqibo sokuthenga, gcinani engqondweni ukuba kuya kufuneka usebenzise ezinye iindlela ezinganampembelelo ukutsala abathengi nzulu ngaphakathi. Umzekelo, i-webinar iposti yebhlog inokukhuthaza iphepha elimhlophe… kwaye iphepha elimhlophe linokuthi khokelela umntu ukuba acele isifundo semeko.
Ayisiyonto ilula njengohlobo olunye lomxholo ngaphezulu kolunye, yindlela abasebenza ngayo bebonke kwisicwangciso esiliqili somjelo. Nalu olunye ulwazi olukhulu olunikezwe kule infographic evela kwi-Eccolo Media, Yintoni uMxholo weNtlalontle oBhenela kwiSondo?
tags: iifayile zomsindoamanqaku ebhlogiizithuba blogblogsZifundo ze zifundoiiwekhishithi zabathengisi ezikhuphisanayoigunya contentiintlobo zomxholoiimagazini zabathengiisikhokelo setekhnoloji eneenkcukachayokwetyisazasemoyeniemail MarketingemailIiVidiyo zeNtengisoUkuthengisa iWebinarmultimediazeendabaIipodcastsmabali a mpu meleloizilayidi zewebhuamaphepha amhlophewhitepapers